ब्रुस ली को चमत्कारिक जीवन र रहस्यमयी मृत्यु बारे जन्नुहोस, आखिर कसरी ३२ बर्षमै मारि ए वा मरे ? हेर्नुहोस मृत्युको रहस्य – Sandesh Press
June 1, 2021 703
मार्सल आर्ट कलाकार एवं हलिउड अभिनेता ब्रुस ली कसरी अल्पायुमै बिते ?ब्रुस लीको मृत्यु हुँदा उनकी छोरी शानोन ली चार बर्षकी मात्र थिइन् । आफ्ना पितासँग विताएको क्षणहरुलाई स्मरणिय राख्न उनले एक वृत्तचित्र बनाएकी थिइन् । हेर्नुहोस –काठमाडौँ – ३२ वर्षकै उमेरमा ब्रुस लीको निधन भएको थियो । तर, छोटो समयमै उनले धेरैको मन जिते । हलिउडमा चिनियाँ मार्सल आर्टस् ‘कुङ फू’ भित्र्याउने श्रेय ब्रुस लीलाई जान्छ । उनी संसारकै उत्कृष्ट मार्सल आर्टिस्टमध्ये एक हुन् ।
Prevगाउँ घरमा पाइने दूधे झारका यस्ता छन् अद्भूत फाइदाहरु?
Nextअनुहारमा आएको कालो पोतोले लज्जित हुनुभएको छ ? छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय
सुटिङको गाडी दुर्घटना : एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते